........*** ပင်လယ် ရှိုက်သံ ***............... ~ MSU Portal
12/27/2013 08:01:00 PM MYANMAR SEAMEN UNION No comments
တန်ဆောင်တိုင် လပြည့်တဲ့ ..
ကောင်းကင်မှာ ၊ ကြယ်တွေတော့ တွေ.ပါရဲ. ...
ငါတို. အတွက်တော့ ၊ ဒီနေ.တွေက မေ့တေ့တေ့ ပါပဲ ။
ပြသဒါး ၊ ရက်ရာဇာ ..ဆိုတာက
တို.လို ဘဝတွေမှာ ၊ ဝေးကွာတာ
လွမ်းတော့ ၊ လွမ်းမိပါတယ်....
ဒါပေမယ့် ......ငါမငိုပါဘူး ။
လှိုင်းကြမ်းမယ် ၊ လေထန်မယ်
သို.ပေမယ့် ..လိုရာခရီး ကိုတော့
တို.တွေ အားလုံးရဲ. .....
ဇွဲ သတ္တိ မာန် အပြည့်နဲ.
သဘောင်္သား ဆိုတာ ၊ ငွေတစ်ခုတည်း အတွက်
မွေးဖွားထားတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုတော့ ... မင်းယုံ ။
သံတမန် ဆက်ဆံရေး အရ၊
စွမ်းနိုင်သလောက် ၊ လှမ်းနေကြတာပါ ...။
တို. သင်္ဘောကြီးတွေရဲ. ၊ ရွှေ.ကွက်တွေသာ မပါခဲ့ရင်...
နောက်ဆုံး ....သူငယ်ချင်း ရယ်
လိုအပ်တဲ့ အရာ ၊ တော်တော်များများ
သယ်ယူ ပို.ဆောင်ခွင့် ရထားတဲ့
တစ်ချို. ဒဏ်ချက်တွေ ကြားကနေ ၊
ဂုဏ်ယူ စွာနဲ. ၊ ငါပွေ.ဖက်ထားဆဲပေ့ါ....။
ဒါကြောင့် မျက်ရည် ကျချင် ၊ ကျနေလိမ့်မယ်.....
တစ်ခုတော့ မျှော်လင့် မိတယ်...
ဒီအချိန် ၊ ဒီလို ညမျိုးမှာ....
ဒီလို လရဲ. အလှမျိုးကို ၊
ဝဝလင်လင် ကြီး ၊ခံစားခွင့် ရနိုင်ရင်
အခုတော့ သန်းခေါင်ယံ ၊ ဂျူတီ အတွက်
ငါ့ကို အိပ်စက်ခွင့် ပြုပါဦး ....။ ။ ။
Posted in: Fun,guide,poem